Ahoana no hividianana rindran-damina amin'ny tranokalanao raha tsy manimba ny SEO ianao?
Backlinks no fototry ny fanamarinana ambony indrindra ho an'ireo motera fikarohana lehibe tahaka izany Google, Yandex, Yahoo !, Bing ary hafa. Tena ilaina ny mampitombo ny volanao, ny fotoana sy ny ezaka amin'ny fampivoarana fanentanana fananganana rindran-kaonty satria afaka manampy betsaka ny tranokalan'ny fikarohana ianao. Satria mifandray mivantana amin'ny kalitaon'ny backlinks amin'ny tranokalanao ny fifamoivoizana, ny loharanon-tranonkala iray manondro anao dia mamaritra ny kalitaon'ny fifamoivoizana azonao. Ary mazava ho azy, mety hanome anjara toerana eo amin'ny toerana misy anao amin'ny valin'ny fikarohana izany. Rehefa mikirakira ny tranonkala hanomezana ny mpampiasa ny vokatra mety indrindra, mikaroka ny botsika manokana amin'ny rindran-kira misy anao. Ireo mari-pamantarana mifandraika amin'ny orinasanao an-tserasera izay avy amin'ny loharano hafa dia mamorona hevitra iray manontolo momba ny tranokalanao. Raha ny marina, maro ireo sanda raisin'ny Google ampiasaina amin'ny fanombanana ny tranokalanao, fa ny backlinks kosa dia manondro ny metric faran'izay manan-danja amin'ny fikarohana karazana fikarohana.
Ity lahatsoratra ity dia natokana amin'ny fomba mahazatra hividianana rindranasa mankany amin'ny tranokalanao, fa tsy fanapaha-kevitry ny Google. Hodinihintsika tsirairay ny antsipiriany. Amin'ny hoavy, manantena aho fa ity fampahalalana sarobidy ity dia hanampy anao hahita vokatra tonga lafatra amin'ny fanentanana fananganana rohy.
Fomba hividianana rindran-damina mankany amin'ny tranokalanao
Ny fomba fanorenana tapaka
izay te-hamorona rindran-damosina iray. Raha araka io fomba fiasa io dia tokony hifandray amin'ny webmaster ianao mba hitaterana rohy tapaka ao amin'ny pejin'ny tranonkala. Amin'ny fotoana iray, manoro hevitra loharanom-baovao hafa ianao mba hanoloana io rohy io ary raha tokony ho ilay rava ianao dia mametraka rohy mifandraika amin'ny tranokalanao. Mitatitra rohy tapaka; Manao tombony amin'ny tompon'ny tranonkala ianao. Izany no mahatonga ny fahombiazan'ny backlink miverena amin'ny toerana misy anao. Mba hampiasana ity fomba fatorana tapakila ity, tokony hojerenao ny fikarohana ara-tsimika amin'ny sehatra nasionaly mba hahita loharanom-baovao iray izay tapaka rohy. Avy eo dia fenoy ny webmaster ary angataho izy hisolo toerana. Mandritra ny resadresaka dia manaja sy mampahafantatra ny tenanao.
Raha te hahazo valiny mahasoa ianao, ny zavatra ilainao. Amin'ny fananganana rohy amin'ny alalàn'ny infografika, dia mahazo fahafahana ianao hahazoana jiro fikarakarana organic ao amin'ny tranokalanao ary hampitombo ny fahefanao amin'ny marika ao amin'ny tranonkala. Ankoatra izay, afaka mahatsapa mora foana ny data amin'ny alalàn'ny infografika ny mpampiasa ary mizara izany an-tsitrapo. Mila mifidy tsara ny infografika ianao. Tokony hanana angona tsy manam-paharoa sy sarobidy ho an'ny mpihaino azy. Tsara ny manaraka ny lohahevitra momba ny varotra amin'izao fotoana izao ary milaza amin'ny olona ny zavatra tiany. Raha vantany vao nikaroka sy nanangona angona ianao, dia izao no fotoana ahitanao ireo matihanina afaka mamorona ny votoatiny. Soa ihany fa tsy olana amin'izao andro izao fa maro amin'ireo tranonkala mpanome aterineto izay manome ny tolotr'izy ireo amin'ny vidiny mety. Raha vantany vao vonona ny hamoahana ny Infografia ianao, dia mila maka antoka ianao fa ho afaka hizara izany ny mpamakinao. Mba hanaovana izany, mamorona fehezan-teny voafidy tokana. Noho izany, raha efa vonona daholo ny zava-drehetra dia azonao atao ny mamorona fanambarana an-gazety momba ny lahatsoratr'ilay sary vaovao ary mamoaka azy ao amin'ny tambajotra sosialy misy kaonty misy kaonty. Ankoatra izany, afaka manolotra mailaka amin'ireo mpampiasa izay efa nampifandraisina tamin'io votoaty io ianao Source .